Meso yeyero emakarwe, 2006 edhisheni kubudirira | Zvazvino Zvinyorwa
Meso eyero emakarwe (2006) inoverengeka Bestseller kubva kumunyori wechiFrench, mutori wenhau uye mudzidzisi Katherine Pancol. Nekudaro, iri bhuku ndiro rekutanga chikamu cheyakavanzika trilogy inoenderera mberi Iyo inononoka waltz yemakamba (2008) uye Central Park squirrels vakasuwa paMuvhuro (2010).
Uye zvakare, iyo huru yekunyora kubudirira kwe Les Yeux Jaunes des Makarwe --Zita rekutanga muchiFrench- raita kuti Pancol ive inozivikanwa pasi rese. Saizvozvo, zita iri rakagamuchirwa, pakati pevamwe, iyo Maison de la Presse Mubairo. Saizvozvo, nyaya yake yakaunzwa kune hombe skrini mu2014 pasi pekutungamirwa naCécile Talerman; nyeredzi Emmanuelle Béart naJulie Depardieu.
1 Pfupiso yeiyo Yero Eyes yeMakarwe, naKatherine Pancol
1.2 Mavara echipiri
1.3 Iyo inflection poindi
2.3 Kubata kwebasa
2.3.2 Protagonist yakavakirwa pachimiro chaicho
2.4 Kuberekwa kwetatu trilogy
3 Nezve munyori, Katherine Pancol
3.1 Hupenyu hwese hwakabatana netsamba uye utapi venhau
3.2 Mabhuku aKatherine Pancol
Pfupiso ye Meso eyero emakarwerakanyorwa naKatherine Pancol
Josephine mukadzi ane makore makumi mana anogara kuParis nemurume wake Antoine nevanasikana vavo vaviri, Hortense naZoe. Pakutanga, Kunyangwe kutadza kuri pachena kwemuchato wake, haakwanise kutora danho rakajeka nekuda kwekusachengeteka kwake. Chero zvazvingaitika, kurambana kwacho hakudzivisike, nekuti murume wake anotaridza kusiririsa mushure mekudzingwa mudura rezvombo kwaaishanda.
Kune zvimwe inri, Antoine anga ari mune ino mamiriro kwegore uye, pachinzvimbo chekuzvizunza, anotanga kusavimbika kumukadzi wake. Zvino kunouya hurukuro yekupedzisira nekuparadzanisa kunonzwisisika. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, nhevedzano yezvimwe zviitiko zve surreal uye zvakabatana zvakaburitswa. Rimwe rawo ibasa rinotorwa naAntoine muAfrica semaneja wepurazi regarwe.
Izvo zvimwe zviitiko zvisinganzwisisike zvinosanganisira vechipiri mavara. Kutanga: Shirley anoshamisa, muvakidzani anoshamisa; uye wechipiri: Amai vaJosephine vanotonhora Henriette. Wekupedzisira akaroora magnate Marcel Gorsz mumuchato wechipiri, izvo zvakamutendera kuti ave nehupenyu hwakanaka hwaaigara achida.
Iyo inflection poindi
Maitiro ezviitiko anotora kwakanyanya kutendeuka kana Iris, Sisi vaJosephine vakanaka, Anotaura kuti akanyora bhuku, kunyangwe iri manyepo. Uyezve, anofarira kuchengeta hunyengeri kusvika kumagumo, kusvika pakubvunza hanzvadzi yake kuti inyore. Kunyangwe Josephine asingade pfungwa iyi, pakupedzisira anobvuma kujekesa chinyorwa mukutsinhana nekugamuchira yakawanda yemari (uye kubhadhara zvikwereti zvake).
Vamwe mwedzi yakati gare gare bhuku racho rinoonekwa rakaburitswa, zvirimo zvacho zvinovakirwa pane yakakura ruzivo rwezvakaitika kare naJosephine munenge muzana ramakore rechi XNUMX. Kuvhurwa kwakava budiriro yemunyori; Iris anowana mukurumbira wese; Josephine, iyo mibairo. Zvisinei, shamwari dzemunyori wenhoroondo dzinofungidzira kuti ndiye munyori wechokwadi webhuku uye izvi zvinopedzisira zvichikanganisa hukama pakati pehanzvadzi.
Iro Yero Eyes Ye ...
Iyo rongero ine mamiriro ezvinhu akakomberedza hupenyu hwezuva nezuva hwevanhuwo zvavo vakadzi nevakadzi mune metropolis seParis. Ikoko, nhengo dzechikadzi dzenyaya dzinoratidza (yega yega nenzira yavo) zvishuwo zvavo zvisina kuzadzikiswa pakati penyaya izere nenhema. Asi kwete zvese misodzi uye kuora moyo, kune zvekare nzvimbo yerudo, kuseka uye zviroto.
Les Yeux Jaunes des Makarwe Iri ibhuku rakatakurwa nezvakawanda zvekufananidzira. Kuti utange, maziso eyero ezvinokambaira anomiririra marudzi akasiyana ekutya: erufu, ehupenyu, ekuva wega, kurasika, kuva akatendeseka ... Vese vatambi vanotyiswa nechimwe chinhu.
Saizvozvo, Pancol inosiyanisa hunhu hwevatambi vake kuburikidza nekutya. Semuyenzaniso: Henriette Gorsz haatyi chinhu, chete kusava nemari yakakwana. Saizvozvo, anozvidza mwanasikana wake mudiki, Josephine, anonzwisisa uye ane rupo. Pane kudaro, mwanasikana wake wedangwe, Iris, anotumira kuna Henriette (mufananidzo we) zvese zvaanoyemura: simba uye simba.
Katherine Pancol akatsanangura sei akaisa pamwechete nyaya yake panguva yemubvunzurudzo yakapihwa muna 2015 kuna Sophie Mason weiyo portal yeAustralia Minhenga yemoto wemotod. Ipapo, munyori wechiFrance akanongedzera kumutsara waIsak Dinesen uyo unoti:
Meso eyero emakarwe anoratidza akasiyana madingindira uye masitayera akaverengwa naKatherine Pancol kubva achiri mudiki. Zvakanaka, mukubvunzurudzwa kwakasiyana siyana akataura kuti ainakidzwa nekuverenga ngano dzezvinyorwa zvevaIjipita, chiArabic neScandinavia. Saizvozvo, munyori wechiFrance akataura Hama dzaKaramazov (Dostoevsky), Le Perere Goriot (Balzac), uye kunyangwe David Copperfield.
Protagonist yakavakirwa pachimiro chaicho
Pancol akatsanangurira Mason kuti protagonist yake yakavakirwa pamunhu chaiye. “Iye neni takataura, aive nechitarisiko chechinyakare, aiyevedza uye pandakanga ndichiteerera, ndakanzwa iko kujairira kunzwa! Josephine akange ave kuda kuzvarwa ”. Nemashoko iwayo, munyori wechiFrench akarondedzera mumwe muongorori waakasangana naye pamhenderekedzo yeNormandy.
Uyewo, Pancol akataura kuti CNRS muongorori (National Center yeSainzi Yekutsvagisa - French chidimbu) anga akatarisisa pakudzidza kamwe chete kwemakore makumi matatu: Vatengesi vemapepanhau ekushanya ezana ramakore rechi XNUMX muFrance. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, munyori akatanga nyika yakatenderedza Josephine, uyo, kusiyana nehunhu chaihwo, anoongorora mavara kubva muzana ramakore rechiXNUMX.
Kuberekwa kwetatu trilogy
Pakutanga, munyori weGallic haana kufunga nezvekuvandudza trilogy. Zvisinei, pakupera kwebhuku rekutanga, Pancol yakaramba ichifunga nezve mavara ... "Chii chakaitika kuhupenyu hwavo? Wakanga wakasuruvara here kana kuti wakafara? Nenzira iyi, zvikamu zviviri zvinoteedzana zvakabuda umo maonero akasiyana evamwe vatambi anofumurwa.
Nezve munyori, Katherine Pancol
Akazvarwa muna Gumiguru 22, 1954, muCasablanca, Morocco; panguva iyoyo guta iri rakanga richiri chikamu chemudziviriri weFrance Paaive nemakore mashanu, Katherine mudiki akatamira kuParis nemhuri yake. Gare gare, Munguva yehudiki hwake, akadzidzira kuve mudzidzisi wechiFrench nechiLatin.
Hupenyu hwese hwakabatana netsamba uye utapi venhau
Pakati-70s, Pancol akapedza degree rake reUchiremba muMazvino Tsamba paYunivhesiti yeNanterre uye akatanga rake basa rezvenhau. Mushure mekuburitsa bhuku rake rekutanga, Moi d'abord (Ini kutanga, 1979), akatamira kuNew York. Ikoko, akanyoresa kuColumbia University kuti atore kosi yekunyora yekunyora uye ndokuenderera mberi achishanda kuyunivhesiti.
Kutanga muna 1981, munyori wechiFrench akatanga kushanda semupepeti we novelas uye semunyori wenhau mumagazini Elle y Paris Match. Mune nhepfenyuro yambotaurwa, akawana mukurumbira wakawanda nekuda kwemaitiro ehurukuro dzake. Ndichiri muBig Apple, Katherine Pancol akaroora uye akaita vana vaviri (mukadzi nemurume). Parizvino akarambana uye anogara kuParis.
Mabhuku aKatherine Pancol
Eugene & Moi (2020) ibhuku rechimakumi maviri nemaviri rakasainwa naPancol, uyo anokoshesa basa rekunyora rinotora makumi mana emakore. Iri ibasa rakatanga mu2006 nekutenda kuvhurwa kwe Meso eyero emakarwe. Hazvishamisi kuti chinyorwa ichi chakashandurwa mumitauro ingangosvika gumi nemaviri; pakati peavo: Chinese, Korean, Italian, Polish, Russian, Ukrainian uye Vietnamese.
Kunze kweavo vataurwa Moi d'abord, Les Yeux Jaunes des Makarwe y Eugène & Moi, Rondedzero yemabhuku ePancol inopedzwa nemazita anotevera:
Mutorwa (Iyo Barbare, 1981)
Scarlet ndapota (Scarlett, hongu zvinogoneka, 1985)
Varume vane utsinye havafambi mumigwagwa (Les hommes cruel ne circulant pas les rues, 1990)
Kubva kunze (Vu de l'extérieur(Seuil, 1993)
Mufananidzo wakanaka kudaro: Jackie Kennedy (1929-1994) (Une si belle mufananidzo, Points reissue, 1994)
Mumwezve kutamba (Encore une danse, 1998)
Et monter zvakajeka dans un wakakura amour ... (2001)
Murume ari chinhambwe (Un homme à kure, 2002)
Ndibate: hupenyu chishuwo (Embrassez-moi, 2003)
Iyo inononoka waltz yemakamba (La Valse Lente des Tortues, 2008)
Central Park squirrels vakasuwa paMuvhuro (Les écureuils de Central Park vakasuruvara, 2010)
Vasikana [Chikamu 1: Tamba masikati] (2014)
Vasikana 2 [Chikamu 2: Nhanho imwe chete kubva pamufaro] (2014).
Vasikana 3 [Chikamu 1: Huya musoro kuhupenyu] (2014)
Kutsvoda katatu (mabheji matatu, 2017)
Bug Bug (2019)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Meso eyero emakarwe
Iyo nguva iri pakati pemaseams